Real Madrid Oo Ka Mid Noqotay Kooxaha Doonaya Didier Drogba - jornalizem
Real Madrid Oo Ka Mid Noqotay Kooxaha Doonaya Didier Drogba
Wararka ka imanaya England ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal saddex geesood ah uu u dhexeeyo saddex koox oo ay Real Madrid ku jirto iyadoo mid walba ay dooneyso sidii ay ku soo xero gashan lahayd Didier Drogba.
Wararka ay qortay Daily Mail ayaa waxa ay sheegayaan in weeraryahankii hore ee Chelsea uu ka tagayo naadiga Shanghayi Shenhua kadib markii uu joogay in kayar lix bilood dalka Shiinaha.
Drogba ayaa lagu macneeyey sababaha laga yaabo inuu ugaga tago kooxda ka dhisan dalka Shiinaha kadib markii kooxdu ay ku adkaatay inay bixiso €12m oo ah mushaarka sanadk walba lagula heshiiyey weeraryahanka reer Ivory Coast ee Didier Drogba.
Waxaa la fahamsan yahay in kooxaha Arsenal iyo Liverpool ay jecel yihiin inay dib u keenaan Drogba horyaalka Premier League bisha Janaayo, balse kooxda Real ayaa xiriir bilow ah la sameysay weeraryahanka.
Waxaana dhici karta inay ka faa’ideysato xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya tababare Mourinho iyo Drogba.
Hase ahaatee kooxda Juventus ayaa iyadana la sheegay in dhowaan ay dalab u gudbisey weeraryahanka kooxda Shiinaha u dheela ee Drogba.